I-China yenkonzo yebhanki enye yokumisa abavelisi, abaXhasi, abaFektri-Ikoteyishini -Shenzhen JAK Medical Technology Co., Ltd.
Sitsalele umnxeba +86 13802272098
Sithumelele i-imeyile yonghongxiao@126.com
ushicilelo lwenkonzo yokuzenzela kunye nokubopha umatshini
umatshini wenkonzo yokuzenzela
umatshini wokwenza ifilimu
Ikhaya > Oogqirha besilivere Oogqirha besilivere > Inkonzo yonyango yebhanki enye
Umshicileli wezonyango oshushu
Ifilimu ye-inkjet yonyango
Inkonzo yonyango yebhanki enye
Inkonzo yonyango yebhanki enye yokumisa, ukuxhasa ukukhutshwa kwekhadi lokuzenzela, ukugcwalisa kwakhona, ukuqesha, ukubhalisa, ukuhlawula, ukuprinta uluhlu, ukushicilela i-invoice, ukushicilela ingxelo yokuqonda isifo.
Imodeli yemveliso: Ukubeka indawo kwimveliso yeJAK-800A
Inkonzo yonyango yebhanki enye, Ukuxhasa ukukhutshwa kwekhadi lokuzenzela, ukugcwalisa kwakhona, ukuqesha, ukubhalisa, ukuhlawula, ukuprinta uluhlu, ukushicilela i-invoice, ukushicilela ingxelo yokuqonda isifo.
I-JAK-800A yezonyango esebenza ngeendlela ezininzi zokuzenzela, uyilo ngokubanzi luvuthiwe kwaye lunobubele.Ungagcina ngokufanelekileyo indawo yokulinda isibhedlele, kodwa inokugcina iindleko zokuthenga, ukufezekisa umatshini oneenjongo ezininzi. Umatshini uthathela ingqalelo imisebenzi yokuvulwa kweakhawunti kunye nekhadi lokuvula, ukubhaliswa, ukugcinwa, ukuthathwa kwamanani, ukuhlawulwa, ukuprintwa kwephepha laselebhu, ukushicilelwa kolwazi lomntu kunye nokuhanjiswa kweenkonzo zekhalenda yonyango, ushicilelo lwe-invoyisi kunye netywina lokuzenzela, ukubuza kunye njalo njalo.
Inkqubo yesiphelo seJunankang "Yinyitong", isebenzisa eyona nto iphambili kwi-Intanethi yezinto zeTekhnoloji, ibonelela ngeenkonzo ezifanelekileyo kunye nokukhawuleza kwizigulana, kunciphisa iingxaki ezikhoyo ngoku ezinje ngobunzima bokubhalisa, kunzima ukubona ugqirha, intlawulo inde kakhulu Ngokufutshane, unokuphucula ngokufanelekileyo unyango, anyuse amava omguli.
(1) umgcini wolawulo lweshishini (2) imodyuli yokubonisa (3) isikrini sokuchukumisa (4) imodyuli yokushicilela ikhadi loshishino (5) umfundi wekhadi le-ID (6) umfundi wekhadi lonyango (7) umfundi wekhadi lokhuseleko loluntu (8) umshicileli wevawutsha (9) umamkeli wamaphepha (10) umatshini we-UnionPay POS (11) ikhibhodi yokubethela intsimbi
(12) umshicileli wamaphepha ovavanyo (13) ukuhanjiswa kwerekhodi yezonyango (14) iprojekhthi ye-invoice (15) ukuskena ibhakhowudi (16) imodyuli yekhamera (17) umatshini wokutshintsha ixesha (18) imodyuli yokulawula ukufikelela kokukhanya (19) unikezelo lwamandla eUPS (20) ibhokisi yamandla (21) iaudiyo (22) ikhabhathi yokulinda
1, iimodeli ezininzi, ngokweemfuno zesibhedlele, ukubonelela ngesoftware kunye nezixhobo ezenzelwe izixhobo.
2, ukufayilisha ikhadi lesazisi, ukujongana nokuqwalaselwa kweshishini, i-WeChat, intlawulo ye-Alipay kwi-Intanethi, ukhuseleko olukrelekrele, olusebenzayo nolulungeleyo.
3. Le nkqubo ilula kwaye ilungele ukukhangelwa kweakhawunti, enemisebenzi epheleleyo enjengokushicilelwa kwengxelo, iinkcukacha zentengiselwano, umbuzo kunye nokuthunyelwa kwelinye ilizwe.
4.Ukubeka iliso ngexesha lokwenyani lwezixhobo ezinokusetyenziswa kunye nesikhumbuzo selizwi esikrelekrele.
5. Ngokusekwe kwimeko eyiyo yesibhedlele kubunzulu, ukusuka kwinkangeleko ukuya kwi-interface, ukusuka kwizixhobo zokusebenza ukuya ekusebenzeni, ukufezekisa ukulungelelaniswa okuphezulu.
Amacala asekhohlo nasekunene anokwandiswa ngokweemfuno, ezinokuthi ziqonde ukusebenza kwabantu abathathu kwisithuba esilinganiselweyo kwaye zenze ngcono ngakumbi ukusetyenziswa kwezinga lezixhobo zesibhedlele.
7, ukusetyenziswa kwescreen sokubonisa, umphezulu wescreen sokubonisa, ezantsi kwescreen sokuchukumisa, ukuxhasa ukuchukumisa okuninzi, okuthelekiswa nefowuni efanelekileyo njengamava achukumisayo.
Iimpawu ezishushu: Ifilimu yonyangoï¼ŒUmshicileli woNyangoï¼ŒInkonzo yonyango yebhanki enye, i-China, abavelisi, abaxhasi, umzi-mveliso, okwenziweyo, ixabiso, iikowuteshini.
Isiphelo sendlela yokuzenzela inkonzo yaseYinyitong
Umgangatho we-2, Isakhiwo sase-Mingdao, i-SEG yeTekhnoloji yeTekhnoloji yokuKhangela, i-28 Cuibao Road, indawo yeBaolong Industrial, iSithili saseLonggang, kwicala laseShenzhen East
© Ilungelo lokushicilela 2020-2021 Shenzhen JAK Medical Technology Co, Ltd.